Seddex macalin oo ah kuwa barata biyaha ayaa loo magacaabay macalinka sanadka ee Minnesota | Faahfaahinta Wararka Degmada
Seddex barayaal oo ah 'Waterwater' ayaa loo magacaabay macalinka sanadka ee Minnesota
Saddex macallimiin Dugsiga Dadweynaha Stillwater Aagga ayaa loo magacaabay 2021ka Macallinka Sanadka ee Minnesota.
Alicia Farmer - macallinka Algebra ee Dugsiga Dhexe ee Oak-Land
Robyn Hassani - Fasalka Koowaad 100% macallinka khadka tooska ah ka dhigta dugsiga hoose ee Andersen iyo Lake Elmo
Hannah Reyes - Macallinka Isbaanishka ee Dugsiga Hoose ee Lake Elmo
Waxay ka mid yihiin 75 barayaal oo laga soo xulay gobolka oo dhan. Musharrixiinta waxaa ka mid ah dugsiga barbaarinta kahor illaa iyo fasallada 12 iyo macallimiinta Waxbarashada Carruurnimada Hore iyo Macallimiinta Waxbarshada Aasaasiga ee Dadka Waaweyn ee ka kala socda dugsiyada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Alicia Farmer waxay wax baraysay 16 sano tanina waa sanadkeedii ugu horreeyay ee dugsiga dhexe ee Oak-Land. Waxay tiri qeybta ay ugu jeceshahay waxbarida waa aragtida isku kalsoonida ardayga oo ku koreysa indhaheeda hortooda iyagoo baranaya inay isku kalsoonaadaan markay baranayaan xisaabta. Farmer waxay sheegaysaa in loo magacaabay musharaxa macalinka sanadka ay si gaar ah macno u leedahay maxaa yeelay waxaa soo magacaabay waalid.
"Waxay ka dhigan tahay in dhammaan dadaalka iyo dadaalka aan u galay ardaydayda maalin kasta ay ixtiraamaan waalidiinta iyo ardayda," ayuu yiri Beerale. "Waxaan ku khushuucsanahay in qof uu waqti u qaatay inuu qirto inaan wax ka badelay nolosha ardaygooda, waxayna iiga dhigan tahay adduunka!"
Robyn Hassani wuxuu wax barayay 15 sano. 3dii 1 / 2dii sano ee la soo dhaafay waxay joogtay Andersen halkaas oo ay ka caawisay aasaasida Qolka Cagaaran - meel aamin ah oo ay aadaan ardayda markay dareemayaan walwal ama ay ku dhibtoonayaan inay maareeyaan dhaqankooda. Sannadkan, Hassani waxaa laga codsaday inay baraan fasalka koowaad ee khadka tooska ah halkaasoo ay ku leedahay fasal isugu jira ardayda Andersen iyo Lake Elmo. Waxyaabaha ay ugu jeceshahay waxbarista shaqsi ahaan iyo khadka tooska ah waa farxadda ay ku aragto wajiyada ardayda markay yeeshaan kalsooni dhowaan la ogaaday. Waxay tiri magacaabista Macallinka Sanadka waxay ka dhigan tahay xitaa inbadan oo soo socota inta lagu jiro sanad dugsiyeed adag.
Hannah Reyes waa macallin ruug cadaa ah oo 12 jir ah sanadkii sedexaad ee barnaamijka barashada luuqada Isbaanishka ee labada luuqadood ee Lake Elmo, Amigos Unidos. Waxyaabaha ay ugu jeceshahay barista ayaa ah inay aragto horumarka iyo koritaanka ardayda ay ka sameynayaan bulsho ahaan, shucuur ahaan, iyo tacliin ahaanba. Waxay tiri xaqiiqda ah inay wax walba ku baranayaan Isbaanishka ayaa ka dhigaysa wax intaas ka sii badan.
Sanadkan waxaa loo xilsaaray inay wax u dhigto fasal dhowr jir ah oo xanaanada iyo ardayda fasalka koowaad ah. Reyes wuxuu yiri waxay ahayd mid dhib badan, laakiin abaal marin leh.
"Xaqiiqda ah in la ii magacaabay Macallinka Sanadka ayaa iga caawineysa inaan ogaado inaan wax ka qabanayo fowdadii aan wada dareemay," ayuu yiri Reyes.
75 Musharaxiinta Sanadka ee Macallimiinta waxaa loo soo koobi doonaa koox semifinalists ah ka dibna finalka. Waxaa dooran doona guddi hoggaamiyeyaal ah oo ka kooban waxbarashada, ganacsiga, dowladda, kuwa aan macaash doonka ahayn, iyo samafalka.
Ku guuleystaha Macallinka Sannadka ee Minnesota waxaa loo qorsheeyay in lagu dhawaaqo May 2.